Mokepilly Macedon Ranges- A Summer Garden Escape
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguNicky
• Phumla • Phumla • Hlaziya • Yitya • Sela • Hamba • Hamba • Qhuba • Phonononga • Ukuzonwabisa
Fumana enye yezona ndawo zintle kwiNgingqi yaseVictoria.
Ifumaneka kumazantsi eMount Macedon, iMokepilly ligumbi lokuhlala elineendwendwe elinegumbi elinye elijikelezwe ziigadi ezisele zinendawo enkulu yokuhlala kunye neyokutyela, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokulala elikhulu elinobukhulu bokumkanikazi obuneposter ezine, indawo yokufunda. ngengqokelela yeencwadi ezahlukeneyo, kunye negumbi lokuhlambela langoku elineshawa kunye nebhafu enkulu yomntu omnye.
I-suite yeendwendwe ze-Mokepilly yindawo yabucala ngokupheleleyo, ethe cwaka, ephangaleleyo, ekhululekileyo apho unokuphonononga ummandla weMacedon Ranges owahlukileyo nowahlukileyo. Yindawo yokuphumla kunye nokutshaja kwakhona ngeglasi yewayini yasekhaya kunye neNetflix encomekayo, indawo yokuhlala kwisofa enkulu enencwadi elungileyo evela kwingqokelela enikiweyo, kunye nendawo yokonwabela isidlo esiphekwe ekhaya kwidesika ichibi kunye nemiyezo.
I-suite ifanelekile kumntu omdala omnye okanye ababini, kwaye siyavuya ukwamkela iindwendwe ezihamba kunye neentsana okanye abancinci - kunye nesithuba se-port-a-cot kwigumbi lokulala kunye nebhafu yomntu omnye, i-suite ithatha lula abancinci.
Sibonelele ngendlu yeendwendwe ngoqwalaselo olucokisekileyo lokuthuthuzela kunye nolonwabo lweendwendwe zethu esizikhuthaza ukuba zisebenzise kangangoko ngokuhlala kwazo ngokonwabela izinto ezininzi ezikule ndawo - ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye neti ethotyiweyo kunye nekofu ephantsi yasekhaya, iSmart. I-TV eneNetflix, ibar yesandi kunye nomdlali weDVD, iWiFi yasimahla, indawo yokuhlambela enkulu yomntu omnye kunye nempahla yokuhlamba.
Nceda uqaphele ukuba nangona kukho indawo yokubasa igesi esithubeni ayikho inkonzo - ngenxa yezizathu zokhuseleko nozinzo le nkqubo yayekwa ukuba isebenze ngaphambi kokuba sinikele ngesithuba ngo-Airbnb. Endaweni yoko uya kugcinwa ufudumele, upholile kunye nayo yonke into ephakathi, njengoko kufuneka, ngesifudumezi-umjikelo we-reverse / air-conditioner kwindawo ephambili yokuhlala kunye nesifudumezi sodonga kwigumbi lokulala. Ingubo yoboya enkulu eshushu kakhulu kwaye etofotofo esulungekileyo nayo ibekwe ekhabhathini ukuba ufuna omnye umaleko.
Isitiya saseMokepilly sineminyaka engaphezu kwamashumi amathathu senziwa kwaye sinengqokelela enkulu yezityalo ezinqabileyo nezingaqhelekanga, igadi yemifuno enemveliso kunye negadi yerozi eqhayisa ngeendidi ezingamakhulu amabini anamashumi amahlanu kuquka iirozi zesiNgesi nesiFrentshi ezininzi ezinevumba elimnandi kakhulu.
Xa isitiya sidubula, siya kuzama ukukushiya neentyatyambo ezintsha ukuze uzonwabele ngexesha lokuhlala kwakho kwaye sigoduke nawe ukuze ixesha lakho eMokepilly lithathe nje kancinci.
Sikuthanda kakhulu ukwabelana ngeeRange zaseMacedon nabatyeleli abatsha nababuyayo ke siyathemba ukuba uya kukhetha iMokepilly njengendawo yakho yokuhlala kude nekhaya kwindawo yakho yokuhlala.
43" HDTV ene-I-Netflix, I-Chromecast
4.94 ·Izimvo eziyi-543
4.94 · Izimvo eziyi-543
IMokepilly imi eMacedon, emazantsi eNtaba yaseMakedoni emangalisayo, kwaye ikwisango lokuya kwindawo entle yaseMacedon Ranges kunye nengingqi yewayini. Akukho kunqongophala kwamathuba okufumana le ndawo ikhethekileyo yeVictoria njenge-foodie, umthandi wendalo, umhambi, umkhweli webhayisikile okanye ubugcisa-ulwazi.
Having grown up in the Macedon Ranges, I'm so grateful to have had the privilege of living in one of Victoria's most beautiful and dynamic locations, where I now host an Airbnb - Mokepilly Macedon Ranges - with my mother Karen on our family property in Macedon. I love gardening and growing roses, trail-riding, dressage and working equitation with my horse Frodo, watching movies, exploring nature and hanging out with family and friends over a local sparkling Shiraz or a good craft gin. I am a volunteer firefighter with the Country Fire Authority (CFA), an operational volunteer with the Victoria State Emergency Service (VICSES), and work in emergency and critical incident management in higher education. My own travels have included Papua New Guinea, Southern Africa (Botswana, South Africa, Tanzania, Malawi, Zimbabwe), Japan, Thailand and a number of Australian destinations including lots of adventuring in Far North Queensland.
Ababumkeli bakho banobubele kakhulu kwaye baluncedo ngoko ukuba unayo nayiphi na ingxaki, uncedo kukufowunela kuphela, ukubhalelana ngefowuni okanye umyalezo wakwa-Airbnb. Uya kubonelelwa ngovuyo ngolwazi malunga neeRange zaseMacedon kunye neendawo ezingqongileyo, kwaye unikwe intaphane yeengcebiso kuluhlu olubanzi lwamava kunye nemisebenzi ebandakanya ukutya, ukukhwela ibhayisekile, ukuhamba ematyholweni, iigadi, iiwineries, iidistilleries, iigalari zobugcisa, nokunye okuninzi.
Ababumkeli bakho banobubele kakhulu kwaye baluncedo ngoko ukuba unayo nayiphi na ingxaki, uncedo kukufowunela kuphela, ukubhalelana ngefowuni okanye umyalezo wakwa-Airbnb. Uya kubo…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Macedon